Hanatanteraka na ho velona?
Ny lalàna (ara-pivavahana / ny hafetsen'i) Hoy i - no. Hoy i Jesosy - Made.
Rehefa mino an'i Jesosy dia tsy ny hatao, fa ho velona. Ny Fanahin'Andriamanitra mitoetra no hikoriana ny alalan 'ny fiainana ianao sy izay mahatonga antsika mihitsy aza manao mihoatra noho ny fitakian'ny lalàna. Misy ny fiainana be dia be.
Ny lalàna, ny fivavahana sy ny hafetsen'i mahatonga antsika hirehareha (rehefa mitantana ny hitandrina daholo nandritra ny fotoana kelikely). Fa ny famonjena dia midika hoe manome voninahitra an'i Jesosy ny rehetra. Velom-pankasitrahana isika ary manetry tena. Ara-pivavahana na ny olona no mpiavonavona indrindra (raha nahomby) sy ny tena ketraka (rehefa ihany no latsaka kely). Ary misy ihany koa ny ara-pivavahana mpihatsaravelatsihy izay efa nanatona-trano filalaovana raharaham-barotra. Fa ny voavonjy no velom-pankasitrahana ny olona, ​​ary te-hanaraka azy i Jesosy malala.
Mba miaina fa ny famonjena dia ny hanao ny tsara zavatra amim-pankasitrahana, satria efa tia.
Avelao hisokatra! Miaina araka izay rehetra ankehitriny, miaraka amin'i Jesosy. Fiainana miaraka amin'i Jesosy tsara loatra ny hiverina amin'ny loany ota sy ny loto.
2Pe 2:22: "Efa mihatra aminy toy ny hoe izany marina izao teny izao: Ny alika miverina amin'ny loany, ary ny nisasa dia nihosin-potaka indray."
Tohizo ny mandeha amin'i Jesosy sy ny anjara fa tsy amin'ny hafa. I Jesosy no tena tsara.
Andriamanitra anie hitahy anao!